Choo onye nnochite anya ahia kacha nso gi
A maara n'ozuzu na ọkpọkọ na akwa akwa na ihe thermoplastic na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ebe a na-ebufe mmiri na mmiri dị ukwuu na-achọ ihe ndị dị elu na-ewu ihe, na-egosipụta nguzogide corrosion dị mma.
Ebumnuche teknụzụ ezubere iji nyekwuo mkparịta ụka zuru oke banyere akụkụ dị iche iche nke imepụta na ntinye nke ọkpọkọ vinidex na fittings. Ihe ndetu teknụzụ ndị a dị
Mgbe a na-ahazi ọkpọkọ PE, ọ dịghị ihe mgbakwunye nnu na-eme ka nnu sie ike, ihe a anaghị egbu egbu, enweghị akwa oyi akwa, enweghị nje bacteria, ọ na-edozi mmetọ nke mmiri ọ urbanụ urbanụ ndị mepere emepe.
Ezigbo nguzogide corrosion
Ewezuga oxidants ole na ole siri ike, ọ nwere ike iguzogide mbuze nke ọtụtụ usoro mgbasa ozi kemịkal; enweghị electrochemical corrosion.
N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ nrụgide, ọkpọkọ PE nwere ike iji n'enweghị nsogbu karịa afọ 50.
Ezigbo nguzogide mmetụta
Egwuregwu PE nwere ezigbo ike na nkwụsi ike dị elu, na ihe ndị dị arọ na-abanye kpọmkwem site na ọkpọkọ, nke na-agaghị eme ka ọkpọkọ ahụ gbawara.
Ike nke ikpo ọkụ ọkụ ma ọ bụ nke ọkụ eletrik nke PE dị elu karịa nke ọkpọkọ ahụ, na nkwonkwo agaghị agbaji n'ihi mmegharị ala ma ọ bụ ibu ndụ.
Ezigbo ọrụ ụlọ
Ọwara mmanụ dị arọ, usoro ịgbado ọkụ dị mfe, ihe owuwu ahụ dị mma, yana ụgwọ ọrụ niile dị ala.
HDPE ọkpọkọ bụ Mkpa ọkụ karịa ihe ọkpọkọ, galvanized ọkpọkọ na ígwè ọkpọkọ. Ọ dị mfe ijikwa ma wụnye, yana obere ọrụ ndị mmadụ na akụrụngwa chọrọ pụtara na nrụnye nrụnye nke ọrụ ahụ belatara nke ukwuu.
HDPE ọkpọkọ nwere ezigbo ime n'ime ya na ọnụọgụ Manning ya bụ 0.009. Omume dị mma na ihe ndị na-abụghị ndị na-ejide onwe ha na-eme ka o doo anya na ọkpọkọ HDPE nwere ikike dị elu karịa ọkpọkọ ọdịnala, ma n'otu oge ahụ na-ebelata ọnwụ nke ọkpọkọ na ike oriri nke nnyefe mmiri.
pe mmiri mmiri
Anyị bụ Plastics na Geosynthetics ọkachamara
Ọ gbalịsiri ike imeziwanye arụmọrụ na nchekwa nke njem ụgbọ mmiri, na-eme ka ahụike mmadụ na ụwa ka mma. Ebumnuche anyị na ọhụụ bụ ịghọ ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi nke na-emepụta uru maka ọha mmadụ, ndị ahịa, ndị na-ekenye ndị ọrụ na ndị ọrụ, ma na-ewe ọhụụ dị ka ihe na-akpata mmepe mmepe.
The ụlọ ọrụ bụ a elu-tech enterprise tụnyere R & D, mmepụta na ahịa. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ ahụ bụ gọọmentị gọọmentị, injinia gas, injinia injinịa, injinia injinia, ogbugba mmiri n'ubi, ike injin isii sistemụ, ọkpọkọ mmiri HDPE, ọkpọkọ HDPE, HDPE gas ọkpọkọ, HDPE ire ọkụ-retardant antistatic mining pipes, HDPE Ala mgbapụta ọkụ mgbapụta, HDPE siphon drainage ọkpọkọ, HDPE pipe fittings, MPP cable jaket ọkpọkọ, wdg karịrị 20 usoro na ihe karịrị 6000 nkọwa nke ngwaahịa.
Anyị ụlọ ọrụ ga-ezi obi na-akwado ndị enyi si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ na imekọ ihe ọnụ echiche nke "elu-edu àgwà, elu-edu aha, elu-edu ọrụ" ike a mma n'ọdịnihu!
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na iji nchekwa nchekwa ọkụ mba na iwu mbenata ikuku na ...
N'ime usoro drainage na mmiri, ọkpọkọ bụ akụkụ dị mkpa n'ime ya, yabụ mma ...